फाइदा:धेरै राम्रो भेन्टिलेसन; विषालु ग्याँसहरू फिल्टर गर्न सक्दछ; तातो राख्नको लागि सक्षम हुनुहोस्; पानी अवशोषित गर्न सक्नुहुन्छ; वाटरप्रूफ हुन सक्छ; लचिलो; अप्रकाशित छैन; धेरै राम्रो र धेरै नरम महसुस; अन्य मास्कहरूको तुलनामा, बनावट अपेक्षाकृत हल्का हुन्छ; धेरै लोचदार, ताने पछि कम गर्न सकिन्छ; कम मूल्य, ठूलो उत्पादनको लागि उपयुक्त।
KN95 स्तर सुरक्षा मास्क प्याकेजि pack ब्याग
निर्मित प्लास्टिक नाक क्लिप, सबै प्रकारको अनुहार फिट।
डबल साइड तंग प्याकेज अलगाव, प्रभावी रूपमा दुबै पक्षमा हावा काट्नुहोस्।
पृथक तह मुनि, प्रभावी क्लीयरन्स जबडा मृत कोण।
डिस्पोजेबल गैर-बाँझ पाउडर-मुक्त ग्लोभ्स
एलर्जी कम गर्न कुनै पाउडर उपचार छैन
यसले पाउडर ग्लोभले गर्दा हुने सम्पर्क दूषितताको सम्भावनाबाट बच्न सक्छ र धेरै एलर्जीको घटना घटाउन सक्छ
घर्षण बढाउन ग्लोभको सतह थोरै पोकमार्क गरिएको छ
ग्लोभ्स सटीकको साथ बनेका छन् र चुहाउँदैनन्
१.%% मदिरा हात सेनिटाइजर स्यानटिसर जेलले प्रभावकारी ढ 99्गले। 99. %99% लाई मार्यो, तपाईको हातलाई चोट पुर्याउँदैन
२. प्रभावकारिता र चाँडै
G. कोमल र नचिलाउने, छालालाई हानी गर्दैन
पानी बचत गर्न सजिलो, पानी संग न धुनुहोस्
Gel. जेल बनावट, तपाईं सजीलै मात्रा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। सानो आकार, बोक्न सजिलो
Kn95 र N95 रेसिरेटर्सको समान स्तरको सुरक्षा छ, तर केवल विभिन्न देशहरूको परीक्षण मापदण्डहरू पालना गर्दछ। Kn95 मास्कले चिनियाँ मापदण्डहरू अनुसरण गर्दछ र N95 मास्कले अमेरिकी मानक अनुसरण गर्दछ। गैर तेल कणहरू (प्रयोगको लागि सोडियम क्लोराइड कणहरू) को लागी उनीहरूको सुरक्षा दक्षता 95%% भन्दा कम हुँदैन।
डिस्पोजेबल सुरक्षात्मक कपडाले क्लिनिकल कार्मिकहरूले लगाएको डिस्पोजेबल सुरक्षात्मक लेखलाई जनाउँछ जब तिनीहरू कक्षा ए संक्रामक रोगहरूको व्यवस्थापन अन्तर्गत कक्षा ए वा संक्रामक रोग बिरामीहरूको सम्पर्कमा आउँदछन्।
पिघलिएको ब्लाउन्ड कपडा मास्कको मुख्य सामग्री हो। पिघलिएको उडाइएको कपडाको मुख्य सामग्री पोलिप्रोपाइलिन हो।
नामले संकेत गरेझैं यो पातलो रबर पट्टी हो जुन मास्कमा नाकको ब्रिजमा मास्क फिक्स गर्न प्रयोग गरिन्छ।
त्यसकारण, नाकको पुललाई पनि नाकको पूर्ण प्लास्टिक पुल - नाकको पट्टि - नाकको पुल पनि भनिन्छ।
हावा पारगम्यता को कार्य मास्क रोप मास्कको विशेषता हो।
तातो र चिसो कामको वातावरणमा कमजोर भेन्टिलेसन वा ठूलो श्रम मात्राको साथ, सास फुल्काको साथ एन्टी हज मास्कको प्रयोगले तपाईंलाई श्वास छोड्दा थप सहज महसुस गर्न मद्दत गर्दछ।